Ere Iris ka Ophthalmologists - 💡💻 Iris - Software maka Eye nchedo, Health na Productivity 🛌👀
Ere Iris ka Ophthalmologists
njikere akwụkwọ ọkwa
Version nke saịtị Bulgarian
Njikere script àjà dọkịta
na-eji ọkụ na-erite uru 10% discount njikọ dọkịta
dọkịta irite 20% ahịa
Olee otú ha ga-eru?
Отивам в Google и почвам да търся и звъня на всички ophthalmologists, optometrists, оптометристи и очни клиники na Bulgaria na ná mba ọzọ.
M ga-aga site na ukochukwu na mgbe ahụ ka na-na nke dọkịta.
Uvezhdavane nke ọrụ, dọkịta ga-nwere mmasi Iris
Ekwentị mkparịta ụka na dọkịta, na otu oge atọrọ
A azụmahịa na a nzute iji na-akwalite ha na-agwọ Iris
Soro na-arụpụta na-eme ka ịkwụ ụgwọ
Hello Ọ adaba,
M Daniel Georgiev, njikwa nke ụlọ ọrụ Iris Technologies.
My ụlọ ọrụ dị nnọọ ka unu na-enyere ndị mmadụ na ahụ ike ha na nsogbu na-anya m na software Iris ugbu a, otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu na ahụ ike software na ụwa.
anyị nwere ihe karịrị 2 nde ọrụ na ọtụtụ ndị na-ọbụna Bulgaria anụwo banyere ya na-eji ya.
Na nke a akara nke echiche na m achọ ịga na oftomatolozite gị ọgwụ.
m, ha ga-enwe ibu ihe nke a, anyị na-eme
na m nwere a aro ha na-eji aka irite ọzọ.
Ònye ịkpọtụrụ, nke onye na-akpọ, na-agwa ndị ọzọ.
Nwere ike ị na-enye m aka? 🙂
Ihe na Ophthalmologists